My Blog List 123
အိန်ဒိယနိုငျငံ North Sentinel ကြှနျးပျေါက လူရိုငျးမြား - ဒီလူမြိုးစုဝငျတှဟော ကမ်ဘာကွီးနဲ အဆကျအသှယျ မလုပျဘဲ နထေိုငျကွသူတှဖွေဈပွီး လူရိုငျးဆနျတဲ့ အကငျြ့မြိုး ရှိကွသူတှပေါ။ The post အိန်ဒိယနိုငျငံ North Sentinel ...
မုန်လာဥနီရဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ကောင်းကျိုးတွေ - အာဟာရမျှတပြီး ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း ကောင်းကျိုးများစွာ ပေးနိုင်တဲ့ ဆေးစာတွေထဲမှာ မုန်လာဥနီဟာလည်း တခုအပါအဝင်ပါပဲ။ ဝါးစားလို့ရပြီး အရသာလည်း ရှိသလို[...]
ကိုအောင်မှိုင်း ● စီးပွားရေးစစ်တမ်း - ကိုအောင်မှိုင်း ● စီးပွားရေးစစ်တမ်း (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၈ တကယ်တော့ အမုန်းတရားဆိုတာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတခုမဟုတ်လား။ တကယ်တော့ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာက...
တာလီဘန် ကိုယ်စားလှယ်တွေ ကန်အစိုးရ နဲ့UAE မှာဆွေးနွေး -
ရခိုင်မြောက်ပိုင်း ဖွံ့ဖြိုးရေး ကုလကူညီခွင့်ရ - ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းက ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ပထမအကြိမ် လေ့လာမှုတွေမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ကျေးရွာတွေမှာ လူထုအခြေပြု စီမံကိန်းတွေ ၃၅ နေရာမှာ စတင် အကောင် အထည်ဖော်ရေးအတွက် မြ...
ရခိုင်ကျင်သန်ကြီးများ ကြိုးစားကြရန် အသက် ၈၆ နှစ်အရွယ် ရွှေမောင်း ၉၉ လုံးပိုင်ရှင် ကျင်သန်ကြီး ဦးမောင်နီမှာကြား - စံမောင်သန်း၊ စစ်တွေ နိရဉ္စရာ? ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရခိုင်အမျိုးသား ပြည်ကျင်သန်များအား ရခိုင်ကျင်လောက ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ကြိုးစားကြပါဟု ရခိုင်ပြည်နယ် ပေါက်တောမြို...
Hemlös räv -Homeless fox - ဆီဒငျနိုငျငံက အိမျယာမဲ့မွခှေေး(Hemlös räv -Homeless fox) Hemlös räv (Homeless fox) is created by artist and sculptor Laura Ford and was bought by Stockh...
လားရှိုး အခြေစိုက် ရမခ စစ်တိုင်းရုံး တိုက်ခိုက်ခံရ - သျှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်း လားရှိုးမြို့ အခြေစိုက် အရှေ့မြောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် ရမခ စစ်တိုင်းရုံးအား အမည်မသိ လက်နက်ကိုင် လူတစ်စုက မတ်လ ၂၅ရက်နေ့ ည ၈နာ...
The Voice Weekly's Facebook Wall
Yangon Media Group's Facebook Wall
RFA Burmese's Facebook Wall
Freedom News Group(Burma)'s Facebook Wall
မြ၀တီ's Facebook Wall
Popular Myanmar News Journal's Facebook Wall
Messenger News Journal's Facebook Wall
7Day News Journal's Facebook Wall
Eleven Media Group's Facebook Wall
Shwe Myitmakha Media Group's Facebook Wall
ဆီးချိုသွေးချိုဆေးတစ်မျိုးက အသည်းအဆီဖုံးခြင်းကိုသိသာစွာလျော့ကျစေ - သုတေသနအသစ်တစ်ခုအရအမျိုးအစား (၂) ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ (T2DM)သုံးတဲ့ဆေး တစ်မျိုးကအရက်ကြောင့်မဟုတ်သော အသည်းအဆီဖုံးရောဂါ (NAFLD) ဝေဒနာခံစားနေရတဲ့ သူတွေမှာအသည်း...
Copyright © 2011 Myanmar Hot News | Powered by Blogger